Las 5 mejores apps de privacidad para Android | Androidsis
Ezona zixhobo zilungileyo zabucala ziyi-5 ze-Android
UAron Rivas | 04/05/2021 14:00 | Ukuhlaziywa ukuba 10/05/2021 16:38 | Ukusetyenziswa kwe-Android, Izixhobo ze-Android
I-Android yinkqubo yokusebenza yee-smartphones ezimeleyo ekunikezeleni ngeendlela ezininzi zabucala kunye nezokhuseleko. Kule nto kufuneka kongezwe ukuba yeyiphi into eyenziwayo ngabavelisi abahambahambayo ngokweziqendu zabo zokwenza ngokwezifiso, njengoko i-Samsung isenza kwifolda yayo ekhuselekileyo, umzekelo, isicelo apho unokugcina kunye nokufihla iifayile, iifoto, iividiyo kunye nokunye ngendlela ekhuselekileyo neyimfihlo ukuze ekungekho namnye ngaphandle kwakho onokufikelela kuzo.
Njengokuba. Ivenkile yeGoogle Play igcwele uninzi lwezicelo ezijolise kubucala beefowuni eziphathwayo, ke ngoko, abasebenzisi, kwaye kolu qokelelo uya kufumana uninzi lwezona zidumileyo nezisetyenzisiweyo. Apha sikubonisa ezona zintle zokusebenza zeemfihlo ze-Android.
Ngaphambi kokuya kuyo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba zonke izicelo oza kuzifumana apha ngezantsi zikhululekile ngokupheleleyo. Abanye banokunikela ngeenguqulelo zabo ezihlawulelweyo okanye eziphambili kunye neempawu zepremiyamu ezifuna imicropayments zangaphakathi. Nangona kunjalo, akunyanzelekanga ukuba uhlawule nasiphi na isixa semali ngokusetyenziswa kwezi.
1 AppLock-Tshixa usetyenziso
2 Ukutshixa isixhobo
3 Fihla iifayile zabucala kunye nemifanekiso- YOKUQALA
4 I-Calculator-Photo Vault fihla iifoto kunye neevidiyo
5 DuckDuckGo isiKhangeli saBucala
Siqala ukudityaniswa nenye yezonaapps zibalaseleyo kudidi lwazo. I-App Lock okanye i-AppLock, njengoko kuchazwe ngokufutshane nangokucacileyo egameni layo, kunjalo isixhobo sabucala nokhuseleko esisetyenziselwa ukuvimba ukufikelela kwizicelo. Ungazifaka kuphela ngegama eligqithisiweyo elinokusetyenziswa kwipateni. Ukongeza, isikrini sokuvula senza ngokwezifiso ngokupheleleyo, kunye nemixholo emininzi kunye nolwakhiwo olwenza ukwazisa i-app ngandlela ithile.
Kuyenzeka ukuba amaxesha amaninzi sicelwe ngabahlobo, usapho kunye nabantu esibaqhelileyo ukuba batsalele umnxeba okanye basebenzise ngokwahlukileyo, kwaye ngenxa yoku kufuneka sinike ifowuni evulekileyo. Kule meko yetyala, umntu unokusebenzisa kuphela into ebeyilindele, kodwa abanye banokusebenzisa eminye imisebenzi kunye nokusetyenziswa ngokungalunganga nangaphandle kwemvume kwangaphambili, okanye into enokuba mandundu, jonga iifoto zethu kunye nemifanekiso kwigalari., kunye nemiyalezo yabucala evela kumajelo eendaba ezentlalo. Kungenxa yoko le nto sinokuziva singakhululekanga, ukuba novalo kunye / okanye ukukhathazeka xa siboleka iselfowuni, kwaye sinesizathu esihle, kuba Zininzi izinto zabucala ethi, ngenxa yesizathu esivakalayo okanye enye, asifuni kwabelana ngayo, kungasekho mntu ubonayo ngaphandle kwemvume.
Ukuthintela olu hlobo lwento, iAppLock ilapha ukuze isebenze. Ngale sicelo, njengoko besesitshilo, unokuthintela ukufikelela kuye nakubani na ongafuniyo ukubona izinto zakho zexabiso, ngaphandle kokuba umnika igama lokugqithisa okanye loo mntu ufumanisa ngandlela thile. Ungabhloka ii -apps ezinje ngeGmail, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, imidlalo efana noMlilo wasimahla, umnxeba weSebenzi weSelfowuni, iPUBG kunye nolunye usetyenziso, kubandakanywa nezo nkqubo kunye nezo zifakwe ngaphambili. Kwakhona, ungenza ngokusesikweni ipatheni yokutshixa ukuba ingabonakali kwaye ungashiyi mkhondo ngelixa uhambisa umunwe wakho kwiscreen.
Omnye umsebenzi olungileyo wesi sixhobo kuku fihla iifayile ezinjengeefoto kunye neevidiyo, ukuze ibe nguwe kuphela onokufikelela kwezi kwigumbi elingaphakathi, elingaphakathi kwiapp. Ngale nto unokwenza imifanekiso kunye nevidiyo zinyamalale kwigalari yefowuni.
Ngalo naliphi na ixesha unokuvula ii-aplikeshini nge-AppLock, ukuze ungafaki iphethini yokuvula ngalo lonke ixesha ufuna ukuvula.
Umthuthukisi: Iqela leTalente le TOH
Njengoko ukuvimba izicelo zezona zidumileyo kwicandelo labucala nokhuseleko, sibuya nenye ethi, nangona ingagqibelelanga ukuba negama loqobo kuzo zonke, kodwa igama elenziwe lafana nalawo aqhelekileyo, lilula kwaye licacile, lenza njalo ngenxa imisebenzi yayo kunye nokulungileyo ekufuneka ikunike.
Kwaye le app isebenza ngendlela efanayo naleyo sele ichaziwe, ngaloo ndlela ibonelela ukuvimba ukufikelela kwizicelo ezongezwe ngaphambili kwibhokisi yokutshixa yeapp. Ngale nto, kuya kufuneka ufake ipateni, ipini okanye iphasiwedi ukufikelela kwiapp oyifunayo ngalo mzuzu. Into emangazayo kukuba indlela yokuvula inokongezwa ngeminwe, kunye nesenzi sokubona (kuphela ukuba ifowuni inayo, kunjalo).
Into enomdla esi sixhobo ikwabonisayo yile imixholo eyahlukeneyo yokutshixa ii -app kunye noyilo inokusetyenziswa nayo, onokukhetha kwaye utshintshe ngalo naliphi na ixesha nangamaxesha amaninzi ngendlela othanda ngayo. Unako kwakhona ukubhloka imiyalezo kunye neefowuni ngale app, into enokuba luncedo kakhulu ngaphezulu kwesinye.
Njengazo zonke ii -apps zohlobo lwazo, ivumela ukuvimba ii -apps zemidiya yoluntu kunye nemiyalezo ekhawulezileyo enje nge-Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegraph, Line nokunye. Ikwaxhasa ukubhloka kwezicelo zenkqubo enjengekhamera. Kwelinye icala, yenye yeenkqubo ezisebenzisa izixhobo ezingaphantsi kwe-RAM kunye nebhetri, into ebaluleke kakhulu kwezi meko zokuzimela okungcono kunye nokusebenza kweselfowuni kuba sisixhobo esisoloko sisebenza ngasemva. Ukongeza, ixhasa iilwimi ezininzi, ezibandakanyiweyo, nokuba kungenjalo, iSpanish nesiNgesi.
Umthuthukisi: I-Lucky Mobile Apps
Fihla iifayile zabucala kunye nemifanekiso- YOKUQALA
Le isenokuba yeyona fayile yokufihla eyona app kwi-Android, ngokude. Kwaye yenye yezona zithembekileyo, zikhuselekileyo kwaye zisebenza kakuhle Iifayili "Zinyamalale" kwiindawo zazo zoqobo, ukuze ibe nguwe kuphela onokufikelela kuzo kwaye uzibone nanini na ufuna.
Ukusebenza kwayo kulula kwaye kuyasebenza. Ukuba ufuna ifayile enjengefoto, ividiyo kunye noxwebhu (i-PDF, iLizwi, i-Excel, njl. ibhalwe ngendlela ekhuselekileyo ngokupheleleyo ukuze ukwazi ukuyijonga kwaye uyenze nantoni na oyifunayo ngalo lonke ixesha ngaphakathi kuyo.
Ukukunika umbono othe ngqo malunga nokuba usebenza njani, ukuba, umzekelo, ufihla ifoto, ayisayi kuphinda ivele kwigalari, kulapho zonke iifoto zihlala zikhona, kodwa kwi-PRIVARY, ethi, indlela, unokufikelela kuphela ngokufaka iphasiwedi okanye ukuvula iphethini. Apha kulapho ukhuseleko kunye nemfihlo yesi sixhobo.
Zonke iifayile, iifoto kunye neevidiyo ezongezwe kwisifuba sohlelo lokusebenza ziyasuswa kwigalari kawonke-wonke emva koko zibhalwe ngokufihliweyo kusetyenziswa Inkqubo ye-AES CTR, indlela yokubhala ethembisa ukunikezela ngokhuseleko olungenangqondo ethi, ngokomphuhlisi, ikwayile isetyenziswa ziibhanki ukuqinisekisa ukhuseleko lwabathengi bazo, nto leyo ethetha lukhulu.
Kwimeko apho yonke into echaziweyo inomdla omncinci okanye ingenamdla kuwe, into enokuthi ibambe umdla wakho ngumsebenzi weFakeTresor. Oku kuyakuthintela nabani na onyanzela ukuba ungene kwigumbi lokungena ekubeni ungene kwelokwenyani okoko unayo igumbi elingumgunyathi, oyena ungangena ukulahlekisa. Eli nqaku linokuba luncedo kakhulu kwaye, ngaphandle kwamathandabuzo, linomdla kakhulu.
I-Calculator-Photo Vault fihla iifoto kunye neevidiyo
Ukuba ufuna ukhuseleko olongezelelweyo kunye nemfihlo kwifowuni yakho ye-Android, Le "khalityhuleyitha", ayisiyiyo ikhalityuleyitha, isebenza njenge trunk ukugcina kunye nokufihla iifoto zakho, imifanekiso kunye neevidiyo onazo kwigalari ngokulula, ngokukhawuleza nangokulula. Kukwasebenza ukufihla ezinye iintlobo zeefayile.
Ukufikelela kule khalityhuleyitha kufuneka ucofe nje kwi-icon yohlelo lokusebenza kwaye ufake ipini, enokuthi ibe kukulingana oyicwangcisileyo ngaphambili, kwaye ucofe uphawu olulinganayo, oluya kuba «=». Ikwaxhasa ukusetyenziswa kweminwe njengendlela yokuvula.
Inkqubo yokubethela okanye i-logarithm esetyenziswe sesi sixhobo sokhuselo kunye nemfihlo yi-AES, eqinisekisa ukhuseleko olupheleleyo lweefayile zonke, iifoto, imifanekiso kunye neevidiyo ezifihliweyo kwesi sicelo sinomdla.
Enye into enomdla kakhulu kukuba, ukuba awufuni abanye bazi ukuba usebenzisa le app, ungayifihla i-icon yayo. Enye into ekufuneka uyiqaphele kukuba inesikhangeli sewebhu sabucala esingashiyi naluphi na umkhondo emva kokugqiba iiseshoni. Kwakhona, ukugqibelela, ungavimba iiapps ngokulula. Kwaye okokugqibela, ibonelela ngokusebenza kwendlwana engeyonyani.
Zininzi iibrawuza kwiVenkile yokudlala yee-smartphones, ezinye zaziwa ngakumbi kunabanye, kodwa bambalwa abonakaliswa ngokunika ukhuseleko olomeleleyo kunye nemfihlo njengoko iDuckDuckGo Yemfihlo Isikhangeli.
Esi sikhangeli siqinisekisa iiseshoni zabucala ezingavumeli ukulandelelwa komntu wesithathu. Ikwanoxanduva lokufuna indawo eziqinisekisiweyo zokhuseleko ukuya kuthi ga ngoku ukukhangela ngokukhuselekileyo, okwenza ukuba kube lukhetho olufanelekileyo lokutsala umnatha ngendlela ezolileyo nengakhathaliyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezona zixhobo zilungileyo zabucala ziyi-5 ze-Android